TORA Pilatus PC-7SAF v.2 Swiss Airforce FSX - Rikoooo
Version of Swiss Airforce Pilatus PC-7 reworked ndege wokuenzanisira uye chinangwa shanduro iyi.
Uyu muenzaniso wakazonaka Wedzerai-pasi HD unhu Graphics uye kukuru chizvarwa FSX rakapotsa Cockpit
The Swiss Air Force (Schweizer Luftwaffe) mumwe pamatavi maviri muchiuto pamwe Swiss Army Swiss.
The Pilatus PC-7 ndege ari kudzidziswa zvechiuto chakagadzirirwa ari 1970s kubudikidza Pilatus Aircraft.
Chakagadzirirwa muSwitzerland kubudikidza Pilatus Aircraft PC-7 Turbo-Trainer wakatangwa pamusoro kumusika 1978 somunhu birddog kurovedza pakuvadzidzisa vezvikepe zvechiuto, kunyanya muminda akirobhatikisi uye kutiza zviridzwa.
The PC-7 pari kuitwa munyika makumi maviri. Mumakore 80 wacho, gakava aitambudza muSwitzerland pamusoro zvichibvira kupatsanura pakati ndege se "hondo zvinhu", izvo zvingadai zvakadzivisa ekisipoti yayo kunyika vari muhondo kana sechinoitika akadaro. Vanotsigira vakaomerwa ekisipoti yayo nharo kuti kunyange akaponesa pasina chombo, zviri nyore kuti kushandurwa nokutenga nyika chikepe pfuti pods (FN Herstal kwave kutaurwa somunhu nokutengesa) kana mabhomba. Zvingadai vakumikidzwa kusanganisira Iraq, Iran, Burma, Mexico uye Guatemala.
Downloads: 27 808